Kabtanka Chelsea Azpilicueta oo ka hadlay Khilaafka Dhexmaray Tuchel iyo Lukaku | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha Kabtanka Chelsea Azpilicueta oo ka hadlay Khilaafka Dhexmaray Tuchel iyo Lukaku
Kabtanka Chelsea Azpilicueta oo ka hadlay Khilaafka Dhexmaray Tuchel iyo Lukaku
Kabtanka kooxda Chelsea Cesar Azpilicueta ayaa ku amaanay tababare Thomas Tuchel sida uu u maareeyay xaalada Romelu Lukaku .
Tuchel ayaa daaha ka qaaday inuu raadsaday talada ciyaartoyda waaweyn ka hor inta uusan ciqaabin Lukaku ka dib markii weeraryahanka 97 milyan ginni uu bixiyay wareysi uu ku sheegay inuusan ku faraxsanayn Chelsea oo uu doonayo inuu ku laabto Inter Milan mustaqbalka.
Azpilicueta ayaa yiri: “Waxaan doorbidi lahayn inaanan xaalad noocan oo kale ah ku dhicin, laakiin mar haddii ay dhacday, waa inaan la tacaalno. Maamulaha kooxda ayaa go’aan ka gaaraya, wuxuu [Lukaku] raali galiyay taageerayaasha iyo maamulaha iyo kooxda, guddiga iyo cid walba.
“Hadda wuxuu raadinayaa inuu guulo la gaaro kooxda. Waxaan filayaa in uu si cad u sheegay in isaga ay ahayd riyadiisii ​​tan iyo markii uu yaraa in uu u ciyaaro kooxda chelsea haatana waxa ugu muhiimsan ayaa ah in uu ka shaqeeyo garoonka sida uu maanta haysto si uu kooxda u caawiyo.
“Hadafyadu way iman doonaan, waxaanan rajaynaynaa in qof walba uu sii xoogaysanayo oo uu hore uga sii socon karo halkan, sababtoo ah waxaan filayaa in dhamaanteen ay ina sugayaan afar ama shan bilood oo aad u xiiso badan.
“Tababaraha waxa uu khibrad u leeyahay la tacaalida noocyada kala duwan ee ciyaaryahanada, xaaladan, laga bilaabo ilbiriqsigii ugu horeeyay, waxa uu wax uga qabtay si degan, isaga oo aan samaynin go’aano shucuur badan.
Rasmi: Thomas Tuchel Oo Shaaciyey Liiska Xiddigaha Chelsea Ee Kulanka Caawa...
Chelsea ayaa raadin doonta inay kusoo laabato jidka guusha marka ay caawa garoonkeeda Stamford Bridge ku qaabbisho Real Madrid, kaddib guul-darradii xanuunka badnayd...
Waa sidee xaaladda caafimaad ee madaxweyne Xasan Sheekh?
Cali Cosoble oo fasiraad cajiib ah ka bixiyey safarka Guudlaawe ee...
Tottenham Hotspur “ma jiraan wadahadalo Paulo Dybala”
Kooxaha Arsenal iyo Newcastle oo ku dagaalamaya Saxiixa Jonathan David
Barca iyo Raphinha oo heshiis gaaray halka Arsenal ay wadahadalo toos...
SOMALIYA OO DHAWAAN KA MAARMI DOONTA CIIDAMADA QALAAD ISKU TASHI
Horudhac: Empoli Vs AC Milan ee Horyaalka Serie A Italy Wararka...